Chii Unboxed Network?
Unboxed – hombe Market
Brands vari kupedza pamusoro 36 mabhiriyoni US emadhora evanhu vezvenhau ma ads pagore. shambadzo idzi dzinowanzopiwa nguva kufuratirwa uye kwete kuvimbwa nevanhu. Zvichakadaro, 9 kupererwa ne 10 vanhu kuvimba kugutsikana takaisa nomunhu anoziva. kuti, ndimo Unboxed anouya. We kunowirirana-kuita mavanga pamwe evanhu venhau vanoshandisa kuti asike uye pambiru zvechokwadi muchiso chokuita kugutsikana. Inoita kuroorana zvizhinji nani, anosika zvechokwadi muchiso Advocacy uye shoko nomuromo maturo. It anopawo evanhu nevezvenhau vanoshandisa.
Unboxed munhu zvizere kutoitwa zvemichina kushandiswa ne pamusoro 100+ pezvitsiga munyika yose (zvakatevedzana kuti US, Kanadha, United Kingdom, Jerimani, Dhenimaki, Norway uye Baltics). pamusoro 40,000 mitsetse remitemo, mazana iterations, uye chigadzirwa pivots rose gore zvakaita kambani kuti nhasi kununura pamwero shoko nomuromo campaignsthat inosanganisira mamiriyoni ose evanhu nevezvenhau vanoshandisa.
The Perfect Mushonga Companies
Unboxed anopa mushonga wakakwana nokuda makambani vachirwara kutambisa nguva uye mari influencer yokutengesa makambani kuti kuvimba basa nyanyisa pezvakaitwa kuwana kodzero influencers, tambokurukura zveefa, uye achitarisira noukama. yakakwirira avabate pezvakaitwa kushomeka nhamba evanhu vezvenhau vanoshandisa vanogona kubatanidzwa neshoko-of-muromo danidziro uye mabhizimisi kazhinji vanoguma kushanda neboka duku evanhu nevezvenhau vanoshandisa – influencers kana vakakurumbira.
Unboxed ari Chokuita wose
Takafunga kunze bhokisi uye vakauya naye kugadzirisa kuti anotibvumira kutsiva ichi dziva duku influencers nemamiriyoni ose evanhu nevezvenhau vanoshandisa – uyo yatinoti Unboxers. Tinewo kutsiva chirongwa mamaneja pamwe yokutengesa nyanzvi vanogona kubata zviuru mishandirapamwe ari decentralized nenzira, Nokuva AI pamwe yakazvimirira samambure Marketing nyanzvi. With kuti, isu dzinoita evanhu vezvenhau vanoishandisa kuti mugove wavo $ 36bn musika.
Bhizimisi yedu yakaiswa kukura kubva uchishanda 10 nyika pari kushanda pamusoro 100 misika. Kuwedzera muitiro tichavaka chikwata 125 nyanzvi ne 2021. Read more…